ရ Nokia ကြီး 3210 အားလုံးအချိန်အကြီးမြတ်ဆုံးဖုန်း? - သတင်း Rule
ရ Nokia ကြီး 3210 အားလုံးအချိန်အကြီးမြတ်ဆုံးဖုန်း?
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ရ Nokia ကြီး 3210 အားလုံးအချိန်အကြီးမြတ်ဆုံးဖုန်း?” ဟန္နဂျိန်းပါကင်ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com သောကြာနေ့ 19 ဇွန်သည် 2015 14.35 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ဖုန်းကိုကိုင် - Nokia က ရှိပါတယ် ၎င်း၏ပြန်လာကြေညာခဲ့သည် မိုဘိုင်းမှ (ဆဲလ်) ဈေးကွက်. ဖင်လန်တယ်လီကွန်းကုမ္ပဏီကြီး, တစ်ချိန်ကကမ္ဘာထဲမှာမိုဘိုင်းဟန်းဆက်များ၏အကြီးမားဆုံးထုတ်လုပ်သူခဲ့တဲ့အရာ, အတူသဘောတူထားပါတယ် Microsoft က နောက်တဖန်ဖုန်းများဒီဇိုင်းကိုစတင်ရန် 2016.
Microsoft ကဝယ် € 5.44bn သည်ကုမ္ပဏီ၏နေတာတ​​ွေလည်းမိုဘိုင်းဖုန်းယူနစ် (စတာလင်ပေါင် 4.6bn) တွင် 2013, ကနေယှဉ်ပြိုင်မှု၏မျက်နှာကိုအတွက်ရောင်းအားကျဆင်းပြီးနောက် ပန်းသီး. ယခုမူကား Nokia ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Rajeev Suri ရှိကြောင်း ကပြောပါတယ် Nokia ကပြန်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ကျနော်တို့အပိုင်းပိုင်း de Resistance ပြန် harking မကူညီနိုင်: ထို Nokia က 3210. ကျွန်တော်ချစ်တော်ဘယ်ကြောင့်ဒီနေရာတွင်င့်.
အဆိုပါ iPhone ကို6တစ်နေ့ထက်လျော့နည်းပျမ်းမျှဘက်ထရီသက်တမ်းရှိပါတယ်, ထို Samsung ရဲ့ Galaxy S6 အများကြီးပိုကောင်းမဟုတ်ပါဘူး. အဆိုပါ 3210? သည်ကြာရှည်ပါ့, ကဲ့သို့, တစ်ပတ်. ဖြစ်နိုင်သည်နှစ်ပတ်အတွင်း, မြွေကစားခဲ့ပုံကိုမကြာခဏပေါ် မူတည်..
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ် ဤ ဟာသအင်တာနက်ကိုရက်နေ့တွင်လည်ပွုပွီ:
့နောက်ဆုံးတစ်ဦးမင်္ဂလာဆောင်မှာဝတ်ဆင်တဲ့ဂျာကင်အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင် 2001 တစ်ဦးက Nokia တွေ့ရှိ 3210 ထိုအိတ်ကပ်ထဲမှာ. ဒါဟာရှိနေသေးကြောင်း2ဘက်ထရီလက်ဝဲတုံး
ငါတို့ရှိသမျှသည်အအတွင်းပိုင်းမြို့ကုန်တိုက်ကြီးတွေ၏အလယ်၌ဖုန်းဆိုင်တွေမှာရိုက်ခတ်စမတ်ဖုန်းဖန်သားပြင်ကနေသတ်ဖြတ်မှုအောင်ဖြစ်ကြောင်းသိရ. ဒါဟာခိုင်ခံ့နှင့်အတူဖြစ်ပျက်တော့မှ 3210, 153g အလေးချိန်. အဆိုပါ 3210 အက်တမ်တစ်ခုဗုံးရှင်သန်နိုင်, ဖြစ်နိုင်သည်အနေနဲ့ငလျင်နှင့်ပေါင်းစပ်နှစ်ခု.
ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာစက်စက်နဲ့အဖုံးကိုချွတ်ပေါ်လာပါတယ်, ဘက်ထရီထွက်တံတွေးထွေး, ဒါပေမယ့်တစ်ဦး chip လက်သည်း၏ညီမျှဖြစ်မှာ. ကပယ် polish, အတူတူပြန်ထားမှုဟာ, နှင့်အရာခပ်သိမ်း ok ဖြစ်လိမ့်မည်. အံ့သြစရာကလူယခုအခါဟန်းဆက်ယိုသောကြမ်းပြင်ပျက်စီးစေလိမ့်မယ်လို့အပြောင်အပျက်ပြောတတ်, ပတ်ပတ်လည်နှင့်မအခြားလမ်း.
အဆိုပါ 3310, ထိုမှခေံဖွစျ 3210, အရာအခြေခံမှသဏ္ဍန် 3210 အလေးချိန်တစ််ပြီးအပေါ်ထားခဲ့, ပို. ပင်အားကောင်းတဲ့ကြီး, နှင့်မှဦးဆောင် မပျက်စီးနိုင်သော 3310 meme.
မပျက်စီးနိုင်သော 3310. Amirite? ဓါတ်ပုံ: KnowYourMeme.com
Nokia က 3310 ဘက်ထရီသိုးထီးတကောင်အဖြစ်အသုံးပြုခံရ. ဓါတ်ပုံ: KnowYourMeme.com
နှုတ်ကပတ်တော်ကို "fascia" ဟုအဆိုပါ၏ခေတ်၌ရှိသကဲ့သို့ဒါရေပန်းစားခဲ့ဖူးပါ 3210. ကျနော်တို့ fasciae အကြောင်းကိုအပေါင်းတို့. အရောင်များအရေအတွက်! အဆိုပါအရောင်တောက်သောသူတို့ကိုမ! အဆိုပါ decals! အဆိုပါစတစ်ကာများ! မြောက်မြားစွာကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ရှင်နှင့်ဂီတမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်အဆိုပါခေါ-off သူတွေကို! အဆိုပါ ရောင်စုံရော်ဘာကီးဘုတ်ပြား! အဆိုပါ fluffy အဖုံးများ! ရှိပါသည် ဘာမြှ ထိုသို့ decorating ရောက်သောအခါကြောင်း off-ကန့်သတ်ခဲ့ 3210. porn-inspired ခါးပန်းကို?, အတူဖုံးလွှမ်း, ကျပန်း, ချောကလက်၏အမှတ်တံဆိပ် သူတို့အပျေါမှာ.
iPhone တစ်ခုနှင့်ဤ Shit အဘယ်သူအားမျှ. "အာကာသမီးခိုးရောင်"နှင့်" သင်ပုန်း "? ဘာမှမပိုပျင်းစရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်?
သေချာအောင်, ယခုအကြီးမြတ်ဆုံး အီလက်ထရောနစ်အနုပညာ နှင့် Rockstar ဂိမ်းအနေနဲ့ app ရဲ့ကိုထိပုတ်ပါမှာရရှိနိုင်, အချိန်ဖုန်းအာကာသနှင့်နာရီအထိ gobbling. ကိုယ်တော်သည်ထို SIM ကဒ်များအပေါ်တစ်မိသားစုတစ်စုလုံးမြှင်သို့မဟုတ်ဖီဖာအပေါ်ပရီးမီးယားလိဂ်အနိုင်ရနိုင်, ဒါပေမယ့်ဘာမှမသန့်စင်သောရိုက်နှက်နိုင်ပါတယ်, နှင့် purist, ၏ adrenaline ပလွံ မွှေ.
Pause နှင့်သင် screwed ခဲ့သည်. လူတိုင်းသည်ကြောင်းသိ, တစ်လူဆိုးဖမ်းပေးအမှား. ထင်ရှားစွာ, တစ်စုံတစ်ယောက်တခါမြွေသိမ်းပိုက်, နှင့်သက်သေပြဤသည်၌ဖြစ်ပါတယ် 13 မိနစ် gif. အဆိုပါဂိမ်းကိုဆဲတိုင်အောင် YouTube ကိုအီစတာကြက်ဥအဖြစ်ကစားရရှိနိုင်ခဲ့ 2014, Google ကကွာ ယူ. အခါ,. မကောင်းသောအခြင်းမရှိကြ? တကယ်ပါပဲ.
ယခုအားလုံးလွမ်းဆွတ်နေ feeling? ကြောက်ရွံ့ရိုသေဘယ်တော့မှမ - က 3210 ဖြစ် ဝယ်ယူရန်ဆဲရရှိနိုင် ebay မှာ. မသာကြောင်း, ဒါပေမဲ့ဒါဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှာ. စမတ်ဖုန်း? meh.
•ဤဆောင်းပါးအပေါ်ပြင်ဆင်ခဲ့ 22 ဇွန်လ 2015. Rajeev Suri ကို Nokia ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သည်, မ Microsoft ကအစောပိုင်းကဆောင်းပါးကဆိုသည်အဖြစ်.
35371	0 အပိုဒ်, အင်္ဂါရပ်များ, ဟန္နသည်ဂျိန်းပါကင်, Microsoft က, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, သတင်း, Nokia က, စမတ်ဖုန်း, နည်းပညာ, တယ်လီကွန်း
← အဆိုပါ 11 သငျသညျလုံးဝလာမည့်နှစ်တွင်လက်လွတ်မနိုင် PlayStation ဂိမ်း Amazon Kindle Paperwhite 2015 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: သေး sharpest နှင့်အကောင်းဆုံး →